Omunye izinzuzo ibele, ngaphezu undoubted angasetshenziswa asikho isidingo ukupheka kanye nokugcina ukudla ingane! "Mkhiqizo" ngaso sonke isikhathi nawe, njalo has izinga lokushisa kwesokudla futhi ukungaguquguquki, kodwa freshness yayo futhi ayikwazi ukukhuluma. Kodwa ngokuvamile okwanele abancelisayo omama ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, kukhona isidingo sokuveza kanye nokugcina ubisi lwebele. Kanye nalokhu isidingo kuphakama imibuzo eminingi mayelana nendlela ukuyigcina, kangakanani lilondolozwe ubisi lwebele nokunye.
Labo abaye nanini abonise futhi engabonakali uzwakalise ubisi lwebele, kungase kubonakale uhlobo abangaziwa. Into wukuthi ubisi womuntu lihlukile evamile ukuba ubisi cow sika hhayi kuphela Ukwakheka yayo kanye nezimpahla, kodwa futhi ukubonakala. Esikhathini esithile ngemva ubisi uzotshala webele ihlukaniswe izingqimba ehlukile, oily ingxenye siyavuka, ukwakha ungqimba engenhla, futhi kungase kubonakale sengathi ubisi kulahleka. Nokho, uma ukuxubana, kuba iyunifomu futhi. Uma isitoreji ubisi lwebele ikhiqizwa njalo, ngakho-ke, it is decanted ngezikhathi ezahlukahlukene, futhi ingahluka ngokubukeka, ngoba lokucuketfwe fat ezahlukene. Ubisi esashiwo ukusuthisa noma ekuqaleni, kuba "amafutha" uma ziqhathaniswa ubisi, okuyinto decanted kokusuthisa.
Lokugcina ubisi lwebele esiqandisini kufanele kwenziwe ngendlela oyinyumba, iziqukathi uvalwe waqiniswa, kungcono uma kuba ingilazi, kodwa hhayi ukugcina ubisi lwebele e nezinto ezenziwe ngepulasitiki ukudla. An izinga ebalulekile isitsha, okwakwenza ukugcina ubisi lwebele, iyona kalula futhi lula ukusetshenziswa. Ngokwesibonelo, ingilazi iziqukathi efanelekayo abilayo futhi kushunqe, kodwa ukushaya ngamandla futhi isikhala kakhulu kule esiqandisini. Izinto ezenziwe ngepulasitiki kunzima ukugqashula ukukhanya, kodwa azikwazi ubilise.
Kunezindlela eziningana imithetho kumele ilandelwe ukuze, okwenza isitoreji ubisi lwebele:
1. At lokushisa 22 ° C kuya ku ubisi uzwakalise zingagcinwa amahora ayishumi, ukugwema elangeni.
2. esiqandisini uzwakalise ubisi lwebele zingagcinwa izinsuku ezimbili efrijini - amasonto amathathu efrijini ezingeni lokushisa ngezansi - 18-20 o C - izinyanga 3.
3. Ukuze ugweme ukumuncwa amaphunga benezinto ubisi Kunconywa ukugcina ubisi lwebele e moya iziqukathi ezikhethekile noma i-container moya.
4. Lapho umnkantsha ubisi ukwenyuka ivolumu, ngakho akufanele agcwalise izikhwama ukumisa ngokuphelele, ukuze ugweme kokuhlukana yabo.
5. isitsha ngasinye kumele njalo ngemvume ebonisa usuku kanye nesikhathi ukudonsa ukuze ugweme ukudideka.
6. eneqhwa ubisi lwebele Kunconywa endaweni okugeza amanzi ukuze silondoloze ubuqotho izingxenye zalo, noma emva ukuyishiya e esiqandisini amahora ambalwa, bese evuthayo esitsheni amanzi afudumele (ubuningi. 37 ° C).
isitoreji Ofanele ubisi lwebele inhlanzeko nokulandela imithetho - isibambiso impilo yengane yakho, ngakho ubisi ufuna ukunikeza ingane Ezinsukwini ezimbili ezilandelayo, akukuhle ukuba iqhwa ukugcina izinto mzimba ubisi. Incibilikiswa ubisi womuntu ayikwazi kabusha eqandisiwe futhi agcinwe. Ngaphambi decanting ubisi Kudingeka ukuthi uphathe webele futhi ugeze izandla zakho ngensipho namanzi. Ngaphambi kokuthi usebenzise zonke izingxenye futha webele, ubisi iqoqo iziqukathi futhi izitsha ezigcine kumelwe sihlanzwe futhi inzalo. Khumbula ukuthi futha webele yenzelwe ukusetshenziswa ngabanye, akufanele kube ukuze uthumele ukusetshenziswa okwesikhashana abanye omama.
ubisi Human kungukudla ekahle izinsana kungekho ingxube yokufakelwa awukwazi ukulishintsha. Kuphela liqukethe bonke izinto ezidingekayo ekukhuleni kwamangqamuzana isimiso sezinzwa futhi ingane ubuchopho zobuchopho, kodwa kuyasiza kumiswa izinhlelo obusebenzayo, ivikela chips ezifweni futhi kuqinisekisa kumiswa uhlelo strong mzimba, kuzomele wenze yonke imizamo ukugcina lactation.
Simple ngomunwe yokuzijwayeza izingane 2-3 iminyaka
Kanjani ukwenza eshintshashintshayo-amafolda for enkulisa?
Bangaki esitolo webele ubisi efrijini, futhi kanjani kahle kulungele?
Ingabe kuphephile ingane ukudla "Agusha" (ukuxuba)? Izibuyekezo omama kanye Ochwepheshe
Riddle: "Yini has a ikhanda, kodwa akanayo ebuchosheni '
Ukusetshenziswa shea ibhotela - imfihlo wobusha nobuhle
Ingadi Secrets: ukufakelwa ekwindla raspberry
Headlamps PSC-60: izici zohlelo lokusebenza
Inkampani Kuhlelembisa nezindlela zalo
Ingabe ikhona ebuchosheni izinhlanzi: netimphawu. Kuyini IQ inhlanzi?